Abwaan Weedhsame oo su’aallo waydiiyey xukuumadda | Berberanews.com
Home Fanka iyo Sugaanta Abwaan Weedhsame oo su’aallo waydiiyey xukuumadda
Abwaan Weedhsame oo su’aallo waydiiyey xukuumadda
Abwaan Xasan Daahir Ismaaciil Weedhsame, ayaa xukuumadda ku eeddeeyey in ay sifo sharci darro ah uga joojisay bandhig fanneed uu magaalada Berbera ku qaban lahaa 16-kii bishan, kaasoo gabi ahaanba baaqday kaddib markii dawladdu amar ku joojisay.
Weedhsame oo maanta warbaahinta kula hadlay Hargeysa, ayaa sheegay in aanu ilaa hadda garanayn sababta looga joojiyey xaflad-suugaaneedka, laakiinse uu u tirinayo xukuumadda oo uu tilmaamay in ay dhowr jeer oo hore handiday.
Waxa uu intaasi ku daray in aanu joojin doonin suugaanta iyo dhaliilaha kale ee uu dawladda u jeediyo oo aanu cidna uga hamranayn.
“Xukuumadda waxa ku waajib ah in ay dhiirigeliso Cilmiga iyo Suugaanta, laakiinse anigu garan maayo goorta sharcigii la tuuray ee la yidhi lagu dhaqmi maayo”ayuu ku sheegay shir-jaraa’id.
Abwaanka ayaa sheegay in aan waligii sidan oo kale looga joojin munaasibad uu fankiisa ku soo bandhigayo “tan oo qudha maaha ee labadii sannadood ee xukuumadda muuse talada haysay waxa la igu waday handidaad iyo daba-gal joogto ah”ayuu raaciyey hadalkiisa.
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Xukuumadda oo laga jawaab celiyey eeddeynta hal-abuurka oo ilaa jimcihii aad loogaga hadlayey baraha Bulshada, dadkuna aad uga dooddayeen.
Previous articlexubno kamida qoyska Boqortooyada Ingiriiska oo iscasilay
Next articleWiil Soomaaliyeed oo derbi-jiif ahaa haddana milkiile shirkadeed ah
Hargeysa oo laga Daahfuray Tartan Ciyaaraha Hidaha Iyo Dhaqanka